Izindaba - Umugqa Ohlanganisiwe
Isipikili sensimbi emnyama
Isipikili Sensimbi Ephuzi
Isipikili esijwayelekile socingo
Isipikili Sensimbi Esingenakhanda
I-Nail Screw Nail
Isipikili se-clout esigaxekile
Isipikili ikhanda lokufulela ikhanda
I-Loop Tie Wire
Encane Ikhoyili Wire
PVC Camera Wire
I-Razor Blade Wire
Straight Sika Wire
Ucingo Olumnyama Oluhlanganisiwe
Lashukumisa Iron Wire
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe, imigqa ehlanganisiwe eminyakeni yamuva inokuthuthuka okusha, umugqa ohlanganisiwe ukuvela kohlelo lokuthola kabusha imfucuza, nakweminye imigqa yokukhiqiza.
Isithando somlilo esine-tube ekhazimulayo engashisi ngokushisa engaqondile, uphethiloli oshiswa ngamalangabi ashubile akhiqizwa ngemuva komoya opholile kusukela ekugcineni kwethubhu ekhazimulayo ngomshini wokushisa komoya ngemuva kokukhipha, kulokhu kusekhona igesi yokushisa ephezulu, ene ukushisa okuningi. Umugqa lashukumisa Ukuze asebenzise ngokugcwele amandla ukushisa, kuhlangene ukusetshenziswa kwamandla yonke iyunithi, ohlelweni esithandweni qeda on the ipayipi eyengeziwe air ukushisa kanye amanzi ashisayo ukushisa, ngokulandelana, umugqa lashukumisa for strip yokuhlanza, amanzi eqeda , umoya oshisayo ongashisi Yomisa futhi ushise isigaba sokuhlanza se-lye. Ngokutholwa kokushisa kwemfucuza yegesi, kunganciphisa wonke umugqa wokuhlanza nokumisa ukufudumeza umusi noma ukusetshenziswa kukagesi, ukunciphisa izindleko zokukhiqiza, ngenkathi kunciphisa ukukhishwa kwamandla
Ubukhulu babuye bancishiswa baba ubukhulu obudingekayo kwento eluhlaza engagxiliwe. Umugqa oshubile ugoqa ngamakhaza yinsika ejwayelekile kakhulu yokuma okuguqukayo kanye nokulayishwa okuqhubekayo okubandayo. Esimeni esisodwa esiguqukayo esigayimayo sokugaya esigayweni sokugaya esigayweni sokugaya kaningana, ukuze ukushuba kwentambo yensimbi kunciphe kancane kancane. Emugqeni wokukhiqiza wokugoqa okubandayo oqhubekayo, umucu wensimbi ubulokhu ugoqelwa ebunzimeni obufunayo ngeqoqo lezigayo eziningi ezigingqikayo.
I-galvanizing: i-galvanizing iyikhoyili eshisayo eshisiwe, inqubo yokwelashwa yekhoyili ebandayo ebandayo. Okuvame kakhulu ukubanda manje
Ishintshiwe lashukumisa ishidi, impahla eluhlaza ngemuva kokugoqa okushisayo ngemuva kokucubungula nokubandayo kokugaya. Ngakho-ke ukushuba kuncane, nobuso bushelelezi ngokwengeziwe, ukuzivumelanisa nokusetshenziswa okuningi. Umugqa ohlanganisiwe Kodwa ngokuthuthuka kobuchwepheshe bezomnotho, izikhathi eziningi zidinga ishidi elijiyile lashukumisa. Uma izidingo zomhlaba zingaphakeme, ungasebenzisa ngqo ipuleti eligoqiwe elishisayo ukuze uhlanganise. Hot-iphuma lashukumisa ishidi ukujiya ngokuvamile 2-4mm, ububanzi 1000-1600mm, futhi amakhaza-iphuma lashukumisa ishidi Ukusabalala ndawo ayinkulu kakhulu, ngakho interchangeability akunamandla kakhulu.
Faka inqubo yokufaka idayimane ndawonye, ​​umugqa ohlanganisiwe emgqeni ofanayo wokukhiqiza ekukhiqizeni izinqubo ezimbili, hhayi kuphela ukulondoloza inqubo, kodwa futhi nokukhiqiza ishidi lashukumisa elingcono, umugqa we-Galvanized okuyindlela yokuxhumanisa oku-inthanethi, eqanjwe ngokuthi indlela yeSenjimir Isithando somlilo Sengmiri esinezintambo ezimbili sinezinto ezimbili ezihlukene, ezifudunyezwa zifike ku-450 ° C esithandweni segesi esenziwe nge-oxidized ukususa igrisi ebusweni bomucu futhi indawo yensimbi yensimbi ifakwe i-oxidized. Futhi insimbi esithandweni sokuncipha ukuze iqhubeke nokushisa ifike ku-700-800 ℃, ukuqedela ukufakwa kabusha kokufakwa kabusha, ukunciphisa isithando somlilo se-ammonia ukubuyisela ingaphezulu lefilimu ye-oxide nokuvikela ukuqhubeka kwensimbi. Ekugcineni, umugqa oshubile umucu wensimbi selehlile uye ku-480 ° C futhi ungene ebhodweni le-zinc. Ukwakheka kobuchwepheshe obushisayo bokudonsela phansi kuyisisekelo sobuchwepheshe besimanje bokudonsa okushisayo, ukuze ububanzi bomkhiqizo bufinyelele ku-1m bese isivinini somugqa wokukhiqiza sifinyelela ku-90m / min. Insimbi engaphezulu ayisasebenzisi izithasiselo, futhi isixazululo sokushisa nezinki sihambisana, umugqa oshubile ukuze izinga lokushisa le-zinc pot, kube lula ukulawula inani le-aluminium, ukwanda okukhulu kwekhwalithi yomkhiqizo.
Isikhathi Iposi: Oct-21-2020
Amathiphu - Imikhiqizo Okufakiwe - Ibalazwe - Ibhayisikobho yezimanga